IZIXAZULULO ZASEKHAYA ZOKUHLANZA IGUMBI LE-PUJA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IKHAYA-N-INGADI
Izixazululo Zasekhaya Zokuhlanza Igumbi Le-Puja
Ikhaya Ikhaya n ingadi Ukwenza ngcono Ukwenza ngcono oi-Denise Ngu UDenise baptiste | Kushicilelwe: NgoLwesithathu, Septhemba 4, 2013, 22:02 [IST]
Enye yezindawo ezibaluleke kakhulu endlini igumbi le-puja. Ikhaya elingenalo igumbi le-puja liyindawo yokuhlala nje. Kubalulekile ukugcina indawo yokukhonzela ihlanzekile ngokwedlulele ngaso sonke isikhathi. Uma kukhulunywa ngemikhosi ebalulekile, ukuhlanza igumbi le-puja kufanele kwenziwe kusengaphambili ukuze ulungele umkhosi. Leli gumbi elingcwele elisendlini yakho kufanele lihlanzwe ngendlela yokuthi amathayela naphansi kucwebezele.
kufanele senze kangaki i-surya namaskar
Kukhona amakhambi asekhaya alula wokuhlanza igumbi le-puja nezinto ze-puja. Ngesikhathi sikaGanesha Chaturthi sikuqondisa ukuthi usebenzise lezi zindlela ezilula zasekhaya ukwenza igumbi lakho le-puja linuke futhi libukeke lihle. La makhambi asekhaya ashiwo ngezansi ukukusiza ukuhlanza igumbi lakho le-puja ayatholakala kalula futhi atholakala emakhabethe akho asekhishini. Ukusebenzisa amakhambi asekhaya kungcono kakhulu ngoba awanawo amakhemikhali anokhahlo angadala ibala noma ashiye uphawu kwinto yesithixo noma ye-puja.
Enye yezinto okufanele uyikhumbule ngemuva kokuba usuqedile ukuhlanza igumbi le-puja nezinto ze-puja, ukufafaza igumbi nge-sandalwood powder noma ngamanzi angcwele eGanges. I-will izoshiya iphunga elihle kakhulu. ISandalwood neGanga jal kubhekwa njengengcwele futhi kukhombisa ubumsulwa futhi.
Bheka amanye amakhambi wasekhaya ongawasebenzisa ukuhlanza igumbi le-puja nezinto ze-puja.
1. Izitsha ze-Puja Copper - Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhlanza izitsha zethusi ze-puja ngosizo lweviniga nosawoti. Lezi zithako ezimbili zizosiza ukususa ukungcola nokungcolisa esitsheni sethusi. Geza izitsha zethusi ze-puja ngamanzi afudumele ngemuva kokugcoba isitsha ngezithako.
2. Izitsha zePuja Silver - Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuhlanza izitsha zesiliva ze-puja ukusebenzisa i-dab yomuthi wokuxubha entweni yesiliva. Manzisa isiponji bese unyakaza isitsha ngokunyakaza okuyindilinga. Yenza le nqubo kuze kube yilapho ukungcola sekuphelile. Sebenzisa indwangu eyomile ukusula ukomisa isitsha sesiliva.
3. Izithombe zeGanesha - Izithombe eziningi zeGanesha zenziwe ngethusi. Ukuhlanza isithixo saseGanesha, umuntu kufanele asebenzise ujusi kalamula. Gcoba ulamula osikiwe omusha phezu kwesithixo bese usebenzisa isiponji esimanzi ukusula isithombe bese ususa ukunamathela okusele ngemuva.
4. Iphansi leMabula - Emakamelweni amaningi e-puja, i-flooring iyimabula. Uma uhlanza ifulethi lemabula, udinga ukusebenzisa esinye sezithako ezihlanza ikhaya kakhulu okuyi-powder yokubhaka. I-lemon ne-powder yokubhaka kuzosiza ukuqeda amabala phansi kwe-marble egumbini le-puja.
Izingubo zesithixo - Izingubo zikaLord Ganesha yinto ebaluleke kakhulu nayo edinga ukuhlanzwa. Izingubo zikakotini ezithambile zidinga ukuwashwa ngesandla ngensipho namanzi.
6. Izindonga zethayela - Wonke amagumbi e-puja anezindonga zethayela ezenezela ebuhleni bekamelo. Ukuhlanza amathayili egumbi le-puja kungenziwa ngosizo lweviniga elimhlophe namanzi afudumele. Okuqukethwe okukhona kuviniga kuzoshiya amathayili akho ekhazimula.
7. Itafula le-altare - Itafula le-altare livame ukwenziwa ngokhuni. Uma izinkuni zindala, ungazifaka esikhundleni sazo ezintsha noma upholishe izinkuni. Sandpaper emaphethelweni e-altare lokhuni ukuze ususe imiphetho ebukhali.
8. Amakhethini - Ukuhlanza amakhethini egumbi le-puja kungumsebenzi olula, kepha kufanele wenziwe ekuseni lapho ilanga seliphumile. Kudingeka amanzi afudumele nensipho emnene ukuhlanza amakhethini e-puja. Uma kukhona u-oyela ochithekile kukhethini, dabha impuphu encane kusisihla ngaphambi kokuyigeza.
9. Umnyango wePuja - Iminyango kaPuja yenziwa ngokhuni. Ukwenza umnyango wakho we-puja ukhanye, thatha ibhola likakotini, engeza amafutha omnqumo bese usula umnyango wonke. Sebenzisa indwangu emhlophe eyomile ukusula umnyango ngemuva kokwelashwa kukawoyela.
10. UPuja Bell - Ukuhlanza insimbi yegumbi le-puja kubaluleke kakhulu. Izinsimbi zethusi zingahlanzwa ngokuhlikihla ucezu lwe-tamarind bese uligeza ngamanzi acacile. Izinsimbi zethusi zingahlanzwa ngosizo lweviniga emhlophe.
ungayenza kanjani i-fiance yakho ijabule
izithombe okufanele zigcinwe egumbini le-pooja
ungayomisa kanjani i-chilli gobi
iziqubulo ezinganeni zentombazane ngesi-Hindi
indlela yokutshala i-lotus ekhaya india
ungasusa kanjani izindebe ezimnyama ekubhemeni